OG, Nigma, Secret, VP တို့ ပါဝငျမယျ့ COVID-19 တိုကျဖကျြရေးရနျပုံငှေ Dota2ပွိုငျပှဲ – Gaming Noodle
OG, Nigma, Secret, VP တို့ ပါဝငျမယျ့ COVID-19 တိုကျဖကျြရေးရနျပုံငှေ Dota2ပွိုငျပှဲ
လကျရှိအခြိနျထိ ကွုံတှနေ့ကွေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (COVID-19) ရဲ့ ရိုကျခတျမှုကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ ကငျြးပဖို့စီစဉျထားခဲ့တဲ့ Esports ပွိုငျပှဲကွီးပေါငျးမြားစှာကို ရှပွေ့ောငျးခွငျးမြားနဲ့ ဖကျြသိမျးခွငျးမြား ပွုလုပျနကွေရပါတယျ။ ယငျးတို့ထဲမှာ Dota2Major ပွိုငျပှဲကွီးမြားဖွဈကွတဲ့ ESL One Lose Angeles Major နဲ့ Epicenter Major တို့လညျး ပါဝငျသှားခဲ့လို့ Dota2ပွိုငျပှဲမြား ထပျမံကငျြးပလာဦးမလားဆိုတာကို ပရိသတျမြား မြှျောလငျ့စောငျ့စားနခေဲ့ကွရပါတယျ။
ယခုအခြိနျမှာတော့ WePlay! Bukovel Minor နဲ့ WePlay: Mad Moon တို့ကို ကွီးမှူးကငျြးပခဲ့တဲ့ WePlay! ဟာ COVID-19 တိုကျဖကျြရေးရနျပုံငှေ Dota2ပွိုငျပှဲကို ပွုလုပျကငျြးပတော့မှာဖွဈကွောငျး ကွညောလိုကျပါတယျ။ WeSave! Charity Play လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ယငျးပှဲမှာ ဆုကွေးငှစေုစုပေါငျး ဒျေါလာ ၁၂၀,၀၀၀ ခြီးမွှငျ့မှာဖွဈပွီး ပရျောဖကျရှငျနယျ Dota2အသငျး ၂၄ သငျး ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွမှာပါ။
ယငျးပှဲကို မတျလ ၂၀ ရကျနကေ့နေ ၂၆ ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပသှားမှာဖွဈပွီး ပွိုငျပှဲဝငျအသငျးမြားဟာ အှနျလိုငျးပျေါကသာ ယှဉျပွိုငျကစားကွရမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ယငျးပှဲကနေ ရရှိမယျ့ စပှနျဆာမြားနဲ့ ပရိသတျမြားရဲ့လှူဒါနျးမှုမြားကို COVID-19 တိုကျဖကျြရေးအတှကျ ပွနျလညျပေးအပျ လှူဒါနျးသှားမှာဖွဈကွောငျးကိုလညျး WePlay! က ယငျးတို့ရဲ့ တရားဝငျဝကျဘျဆိုကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားထားပါတယျ။
WeSave! Charity Play ပှဲမှာ ပါဝငျကစားကွဖို့ သခြောပွီးသား အသငျးမြားကတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈကွပါတယျ။
• Geek Fam
• Team Nigma
• No Ping Esports
ယငျးပှဲမှာ Sheever နဲ့ Dendi တို့ အပါအဝငျ Dota2caster အမွောကျအမြားက အင်ျဂလိပျ ရုရှား ၂ ဘာသာနဲ့ ကွညောပေးသှားမှာဖွဈကွောငျးကိုလညျး WePlay! ဝကျဘျဆိုကျမှာ ရေးသားထားပါသေးတယျ။ WeSave! Charity Play ပှဲဟာ Dota2ပွိုငျပှဲစောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ ပရိသတျမြားအတှကျ သတငျးကောငျးဖွဈတာမို့ ဖျောပွလိုကျရပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
source: WePlay!, afkgaming
OG, Nigma, Secret, VP တို့ ပါဝင်မယ့် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေ Dota2ပြိုင်ပွဲ
လက်ရှိအချိန်ထိ ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ Esports ပြိုင်ပွဲကြီးပေါင်းများစွာကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများနဲ့ ဖျက်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြရပါတယ်။ ယင်းတို့ထဲမှာ Dota2Major ပြိုင်ပွဲကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ ESL One Lose Angeles Major နဲ့ Epicenter Major တို့လည်း ပါဝင်သွားခဲ့လို့ Dota2ပြိုင်ပွဲများ ထပ်မံကျင်းပလာဦးမလားဆိုတာကို ပရိသတ်များ မျှော်လင့်စောင့်စားနေခဲ့ကြရပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာတော့ WePlay! Bukovel Minor နဲ့ WePlay: Mad Moon တို့ကို ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့တဲ့ WePlay! ဟာ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေ Dota2ပြိုင်ပွဲကို ပြုလုပ်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ WeSave! Charity Play လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ယင်းပွဲမှာ ဆုကြေးငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Dota2အသင်း ၂၄ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။
ယင်းပွဲကို မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများဟာ အွန်လိုင်းပေါ်ကသာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းပွဲကနေ ရရှိမယ့် စပွန်ဆာများနဲ့ ပရိသတ်များရဲ့လှူဒါန်းမှုများကို COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပြန်လည်ပေးအပ် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း WePlay! က ယင်းတို့ရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
WeSave! Charity Play ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားကြဖို့ သေချာပြီးသား အသင်းများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။
ယင်းပွဲမှာ Sheever နဲ့ Dendi တို့ အပါအဝင် Dota2caster အမြောက်အများက အင်္ဂလိပ် ရုရှား ၂ ဘာသာနဲ့ ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း WePlay! ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရေးသားထားပါသေးတယ်။ WeSave! Charity Play ပွဲဟာ Dota2ပြိုင်ပွဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ပရိသတ်များအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တာမို့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။